मोरङ काँग्रेसमा पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत बलियो, के होला मोरङमा गठबन्धन ? — Purbicommand
मोरङ काँग्रेसमा पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत बलियो, के होला मोरङमा गठबन्धन ?
२०७८ चैत्र २१, सोमबार १६:४५ गते
विराटनगर । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले ‘स्थानीय आवश्यकताका आधारमा दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने’ निर्णय लिएपछि विभिन्न जिल्लामा सत्ता गठबन्धनका दलहरु संयुक्त चुनावी अभियानमा होमिएका छन् ।
तर, वाम दलहरुसँग गठबन्धन नगरी काँग्रेस चुनावमा अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाको गृहजिल्ला मोरङमा भने अवस्था ठीक विपरित देखिएको छ । मोरङ काँग्रेसमा पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत बलियो देखिएको छ ।
कार्यकर्ताहरुको यही दबाबकै कारण मोरङ काँग्रेस नेताहरु तालमेलका लागि अनिच्छुक देखिएका छन् । काँग्रेस केन्द्रले चुनावी तालमेलका पक्षमा निर्णय लिएलगत्तै विभिन्न प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले संयन्त्र बनाउने, संयुक्त कार्यदल बनाउने काम थालिसकेका छन् ।
प्रदेश १ मै पनि दुई दिनअघि काँग्रेससहितको प्रदेश कार्यदल बनिसकेको छ । प्रदेशका सभापति र महामन्त्री नै कार्यदलमा बसेका छन् । केन्द्रले निर्णय लिनु अघि नै तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लामा सत्तारुढ गठबन्धनका जिल्ला समितिहरुले संयुक्त संयन्त्र बनाएर वडा तहसम्मै तालमेल गर्ने निर्णय लिइसकेका छन् ।
प्रदेश तहका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले त चैत २५ भित्र हरेक जिल्लाबाट सम्भावित चुनावी तालेमलको प्रारम्भिक खाकाबारे विस्तृत रिपोर्टिङ अनिवार्य पठाउन मातहतका कमिटीहरुलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । तर, मोरङ काँग्रेसमा भने त्यसका लागि कुनै तयारी भएको छैन । चैत २४ मा जिल्लाको आमसभा आयोजना गर्ने काममा काँग्रेस लागेको छ । ‘हामी चैत २४ मा आमसभा गर्दैछौं,’ काँग्रेस मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बुले भने ‘त्यसपछि जिल्ला समितिको बैठक बसेर बल्ल निर्णय लिनेछौं ।’
सभापति लिम्बुका अनुसार काँग्रेसको परम्परागत आधार क्षेत्र मानिने मोरङमा वैचारिक रुपमा धरातल नमिल्ने दल (वाम दल) सँग चुनावी तालेमल गर्न नहुने पक्षमा बहुसंख्यक कार्यकर्ता उभिएको अवस्था छ । ‘त्यसैले यो तालमेल एकदमै गाह्रो, पेचिलो र गम्भीर कुरा भएको छ,’ उनले भने ‘केही थोरै ठाउँमा मात्रै मिलेर जानुपर्ने मत आएको अवस्था छ ।’
मोरङमा ८ नगरपालिका , ८ गाउँपालिका र एउटा महानगरसहित जम्मा १७ स्थानीय तह छन् । विराटनगर महानगरपालिकासहित काँग्रेसले २०७४ को निर्वाचनमा एक्लै मोरङका नौ वटा स्थानीय तह जितेको थियो ।
जसमध्ये उर्लाबारी नगरपालिका, रतुवामाई, लेटाङ, सुनवर्षी, सुन्दरहरैंचा नगरमा जितेको काँग्रेसले कटहरी गाउँपालिका, केराबारी, धनपालथान गाउँपालिका जितेको थियो । बुढीगंगा गाउँपालिकामा विजय गच्छदार नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकले जितेको थियो । गच्छदारको दल काँग्रेसमा समाहित भएपछि अहिले मोरङमा १० स्थानीय तह काँग्रेसको नेतृत्वमा छन् ।
एमालेले २०७४ मा पथरीशनिश्चरे र बेलबारी नगरसहित कानेपोखरी गाउँपालिका, ग्रामथान र मिक्लाजुङ गाउँपालिका जितेको थियो । रंगेली नगरमा माओवादीले जित हासिल गर्दा जहदा गाउँपालिकामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी (हाल जसपा) ले जितेको थियो ।
यसरी निकट अतितको चुनावी गणितमा अरु जम्मै दलले जितेको भन्दा धेरै स्थानीय तह आफू एक्लैले जितेको ठाउँमा काँग्रेस जिल्ला तहका नेताहरु भागवण्डा गर्न अनिच्छुक देखिएका हुन् । यसबाहेक नेकपा विभाजित भएको, त्यसपछि एमाले पनि सग्लो नरहेको, जसपा विभाजनको फाइदा आफैलाई पुगेको काँग्रेसको अनुमान छ । त्यस्तै राप्रपाको सुनिल थापा समूह र गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक काँग्रेसमै समाहित भएको कारणले आफ्नो शत्तिः झनै बढेको विश्वासमा काँग्रेस नेताहरु छन् ।
यसबाहेक मोरङमा संस्थापन पक्षभन्दा कोइराला पक्षको वर्चश्व बलियो भएका कारण पनि चुनावी तालमेलका पक्षमा नेताहरु उत्साही नदेखिएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रको निर्णयप्रति डा. कोइरालाले खुला रुपमा असन्तोष पनि प्रकट गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि कोइरालाले ‘घरघर जाउँ माओवादी जिताऔं’ भनेर कसरी भनुँ भन्दै पार्टी केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए । कोइरालाको गृहजिल्लामा त्यसको प्रष्ट झल्को महसुस भएको गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरुको भनाइ छ ।
‘मोरङमा काँग्रेस नेताहरु चुनावी तालमेललाई लिएर अहिलेसम्म उत्साही पाएका छैनौं,’, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का सचिव गणेश उप्रेती सुशिलले भने ‘केन्द्रको स्पिरिट अनुसारको व्यवहार जिल्लाका नेताहरुको पाएका छैनौं । प्रदेशले २५ गतेसम्ममा सबै रिपोर्टिङ मागेको छ । उहाँहरु त्यो बेला आमसभा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसले उहाँहरुको मनस्थिति तालमेल अनुकूल नभएको देखिन्छ ।’ यस्तो अनुभव गठबन्धनका अन्य दलका जिल्ला नेताहरुलेसमेत गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा संलग्न दलका मोरङस्थित नेताहरुको पहिलो बैठक साताअघि विराटनगरमा भएको थियो । त्यो बैठक केवल औपचारिकतामा टुंगिएको सहभागी नेताहरुले बताएका छन् । ‘त्यो बैठकमा चिया मात्रै खाने काम भयो, काँग्रेसका साथीहरु तालमेलका पक्षमा कतै पनि सकारात्मक देखिनुभएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ‘त्यसयता कुनै छलफल भएको छैन । पार्टीको काम भनेर उहाँहरुले छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउनु भएको छैन ।’
यसले मोरङमा सत्तारुढ दलहरुबीच चुनावी तालमेल होला कि नहोला भन्ने दुवै सम्भावना जिवितै राखेको ती नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टी केन्द्रले गरेको निर्णय नै खुला ढंगको भएका कारण जिल्लाले त्यसबारे. तय गर्ने काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् । ‘स्थानीय आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने’ निर्णयले जिल्लाले केही दिनमा यसबारे निर्णय लिने काँग्रेस सभापति लिम्बुले बताए । ‘तालमेल गरिहाल्ने वा नगरी हाल्ने टुंगोमा हामी पुगेका छैनौं,’ लिम्बुले भने ‘राष्ट्रिय अवस्था अनुसार तालमेल आवश्यकताका रुपमा देखा परेको छ । त्यसबारे गम्भीर भएरै हामी निर्णय लिनेछौं ।’